Maitiro Ekufunga Usati Wataura: 6 Matanho AUNOFANIRA Tora - Blog
Maitiro Ekufunga Usati Wataura
Wakambotaura here chimwe chinhu chawakazodemba kuti wataura?
Munhu wese has.
sei kurarama uri nzendo
Wakambove nemashoko akataurwa here kwauri kuti iwe dai dai asina kutaurwa?
Munhu wese ave nechiitiko ichi.
Hatina simba pamusoro pezvinotaurwa nevamwe kwatiri. Asi isu tine zvakawanda zvekutonga pane zvatinotaura kwavari.
Mashoko edu anogona kuvaka kana kuputsa. Kutaura kwedu kunogona kukurudzira kana kutapudza. Zvatinotaura zvinogona kuporesa kana kukuvadza.
Pane here dzimwe nzira dzatisingazopedzisira tademba mazwi atinotaura? Imwe nzira yatinogona kunatsiridza zvatinotaura?
Neraki, kutaura kwedu kunogona kuvandudza zvakanyanya nekutevera mutemo mumwe wakapusa: funga usati wataura.
Izvo zviri nyore kutaura. Asi isu tinozviita sei izvi nenzira inoshanda?
Zvakanaka, kana chinangwa chiri chekufunga usati wataura, ndinoda kukupa chirevo chinofanira kukubatsira iwe kuita izvo chaizvo.
Ichokwadi, iri pedyo zvikuru neshoko rokuti 'funga.' Iro izwi T-H-A-N-K-S.
Isu tese taizopa kutenda kana mazwi ataurwa kwatiri aine hushamwari uye ane mutsa. Saizvozvo, vamwe vanozopa kutenda kana mazwi edu zvakanaka uye zvinobatsira.
Saka ngatitarisei nezvechidimbu T-H-A-N-K-S, uye tione kuti zvingatibatsire sei kudzivisa kutaura chimwe chinhu chatichazo rue rimwe zuva.
T = Chokwadi
Tinotanga neshoko rechokwadi. Ndizvo zvauri kuda kutaura ichokwadi? Kana zvisina kudaro, zviri nani kuramba wakanyarara.
Unoziva sei kuti ichokwadi?
Kana iwe uri kungo tora zvawakanzwa, zviri nyore. 'John akandiudza kuti anonoka mangwana.'
Iwe hausi kufanotaura nguva yekuuya kwaJohane. Iwe hausi kutaura kuti John achanonoka kana kuti kwete. Uri kungozivisa izvozvo John akadaro anonoka mangwana.
Saka zvauri kutaura ndizvo ichokwadi.
Asi zvinowanzoomera kupfuura izvi. Patinoita chirevo tichiti tinoziva chimwe chinhu ichokwadi, tinofanirwa kuve nechokwadi kuti chiri.
kuendesa mukomana wangu kuzuva rake rekuzvarwa
Chii chinobva ruzivo? Kunobva iko kwakavimbika here? Tine chokwadi chekuti takanzwa nemazvo? Iyi ingori pfungwa yedu yatiri kupfuudza sechokwadi? (zano: zvishoma zve kufunga kwakadzama inobatsira mune izvi zviitiko)
Kana isu tiri kutaura chimwe chinhu nezve mumwe munhu, zvakatonyanya kukosha kuve wakarurama uye wechokwadi. Makuhwa uye makuhwa zvinokura pamashoko asiri iwo kana zvirevo zvisiri zvechokwadi.
Usave purveyor wenhema. Iva nechokwadi chekuti zvaunotaura ndezvechokwadi. Iva nechokwadi chekuti ichokwadi.
Saka kana iwe usingazive, tsvaga. Kana usina chokwadi, ongorora kaviri. Kana iwe uchiziva kuti hachisi chokwadi, usataure icho.
H = Inobatsira
Kutaura chokwadi hakuna kukwana. Isu tinodawo kutaura kuti chii zvinobatsira.
Tinoda kuti zvinhu zvive nani nekuda kwezvatakataura. Tinoda kutaura mazwi anobatsira pane kutadzisa.
Kune nzira dzisingaverengeke dzatinogona kutaura mazwi anobatsira.
Taura mazwi ekurudziro
Ipa rumbidzo yechokwadi
Ita zano rinobatsira
Ipa yambiro yeushamwari
Ehezve, dzimwe nguva hurukuro yedu inotarisana nekuchinjana kwehukama izvo zvishoma kupfuura kubata. Kuwirirana kugovana ruzivo rwunoita kuti vanhu vazive zvatiri kuita kana zvatiri kuronga.
Asi kunyangwe mukukurukurirana kwakadaro, mazwi edu anofanira kubatsira neimwe nzira. Kana pasina chimwe chinhu kunze kwekuvimbisa mumwe munhu kuti vakachengeteka nesu uye vanogona kuve ivo vakatitenderedza.
A = Kusimbisa
Kunyangwe zvedu hurukuro dzisingafanire kuva chinangwa chekudyidzana-kukurisa chikamu, mazwi edu anofanira zvakadaro simbisa avo vatiri kutaura navo.
Nekusimbisa handireve kubhadhara kurumbidza. Kunyangwe kurumbidza kuchisimbisa. Ini handisi kutaura pamusoro pevanhu vanotaura nezvepep hurukuro. Kunyangwe dzimwe nguva isu tichida imwe uye vamwe vanovada.
Zvandiri kutaura nezvazvo kutaura nevamwe vanhu nenzira yekuti unovasimbisa semunhu akakodzera kuremekedzwa.
Iwe unotaura kwavari sekukosha kwavo. Kwete kwauri chete, asi kurudzi rwevanhu.
Unoita sei izvi? Nzira dzinoverengeka.
Dzokorora mazwi avo pachavo
Taura zvine mutsindo
Taura zvine rukudzo
Bata zvavanotaura zvakakomba
Taura navo senge iwe une hanya navo semunhu
Isu tese tinoda kunzwa kusimbiswa. Tose zvedu tinoda kutenda uye kunzwa kuti isu tine basa neimwe nzira.
Chero munhu wauri kutaura naye achada kusimbiswa sezvaunoda iwe. Saka vasimbise kuburikidza nemazwi aunotaura.
Matipi gumi Ekubatsira Vaviri Kuti Vataurirane Zvinobudirira Muhukama Hwavo
Maitiro Ekurira Nenjere Uye Taura Zvimwe Zvakaringana
13 Zvikonzero Nei Vanhu Vasingateerere Iwe
8 Zvipingamupinyi Kukurukurirana Kunobudirira
Maitiro Ekudzikama Kana Iwe Uchinyatsotsamwa (+ 7 Zvinhu ZVISINA KUITA)
Maitiro Ekutaura Zvakanyanya Kujeka, Mira Kugunun'una, Uye Unzwiwe Nguva Dzese
N = Zvakakodzera
Iyi ingangodaro yakaomesesa imwe ye6 kufamba. Ndeipi chimwe chinhu zvakafanira kutaura? Ndeipi painongobatsira chete? Zvinokuvadza riini?
Zvimwe zviitiko zvakajeka…
sei kurega kuita zvakafanana zvikanganiso
Kana mumwe munhu achigadzirira kutyaira kumba kana ambenge anyanya kunwa, iwe uchazoda kutaura navo zvakananga uye kuvaudza kuti hazvina njodzi kana huchenjeri kutyaira kumba mune kwavo. Mashoko akadaro anogona kusakosheswa, asi iwo haana kukosha.
Dzimwe nguva, isu tinosarudza kutaura mazwi asiri chete asina basa, iwo zvinokuvadza . Pamwe kwete neimwe nzira inobatika, panyama. Asi zvinokuvadza munhu pamoyo nepfungwa.
Ndiwo hwaro hwekushoropodza kusingagadzirise. Kutsoropodza kunoitwa zvakanyanya kubatsira iyo mutauri kupfuura iyo munzwi. Zviri nyore kwazvo kutsoropodza. Zvakanyanya kuoma kusimbisa.
Zvinodikanwa here kuti kune mumwe munhu, 'Unogara uchinonoka'? Izvi zvinovakurudzira here kuti vabate nguva? Kwete.
zvinorevei kana mumwe munhu akakudana kuti hauna kudzika
Zviri nani kungovayeuchidza kuti zvakakosha kuva panguva iyo pavanogona kunyatsoita chimwe chinhu nezvazvo.
Zvinonyatso kudikanwa here kuti kune mumwe munhu, 'Hauzombofi wakaita chero chinhu'? Inoita izvi vakurudzire neimwe nzira? Kwete.
Zvirinani zvirinani kuve kuvadenha kuti vavandudze. Kutaura imwechete shanduko iyo inogona kubatsira. Uye kuzviita nehunyoro uye nehanya.
Chinokosha kana zvasvika pakudikanwa ndechekungozvibvunza usati wataura, 'Izvi zvinodikanwa here?'
Kungobvunza iwo mubvunzo kunowanzo kupa mhinduro yakanakisa. Kana zvichidikanwa, enda mberi uye utaure. Kana zvisiri, chengeta iwe pachako kwazviri.
K = Mutsa
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti nyika yedu yakanyanya kushomeka kupfuura zvayaimbove. Kune ruvengo rwakawanda munzanga yazvino zvekuti zvinotyisa kuona vanhu munzvimbo inoungana vanhu vachitaura zvakanaka kune vamwe. Kunyanya kune avo vanopikisa.
Kunyangwe iye mumwe wacho ishamwari yehupenyu, shamwari, waunoshanda naye, kana mhandu, unogona kutaura nemutsa kwavari. Uye iwe unofanirwa. Hapana chinhu chinowanwa neimwe nzira.
Mashoko emutsa mazwi ekuremekedza. Ndiwo mazwi ayo ratidza rukudzo . Mashoko emutsa anovaka pane kuputsa. Ivo vanokurudzira uye vanoita kuti rimwe zuva remumwe munhu kana kunyangwe rwendo rwavo rwehupenyu rwuve nyore uye runonakidza.
Mashoko emutsa akasununguka kutaura. Zvinotora zvishoma zvishoma kuyedza kutaura chimwe chinhu chine mutsa pane chimwe chinhu chakatsoropodza, chakaoma, chine hutsinye, kana chine utsinye .
Izvo zvakanzi mazwi akasununguka. Zviri mashandisiro aunozviita izvo zvinogona kukubhadhara.
Mashoko emutsa anobatsira, ane hanya, ane tsika uye ane ushamwari. Izwi rine mutsa kubva kumutorwa rinogona kuita zuva remunhu. Iva munhu anopa izwi rine mutsa.
Sezvo chirevo chichienda:
Semunhu mumwe ini handikwanise kushandura nyika, asi ini ndinogona kushandura nyika yemunhu mumwe.
Iva iye anoshandura nyika yemunhu mumwe kuburikidza nemazwi ako emutsa.
S = Kuvimbika
Chiyero chekupedzisira che 'kutenda' usati wataura ndeche kutendeseka. Kutendeseka kwakafanana nekutendeseka, asi hazvina kufanana.
Kutaura chokwadi kutaura zvazviri ichokwadi. Kutaura chokwadi kutaura zvazviri zvechokwadi. Zviri nyore kuva akatendeseka pasina kuva wechokwadi. Zvakanyanya kuoma kuva pachokwadi pasina kutendeseka.
Panjodzi yekuita generalizing, magweta nevezvematongerwo enyika vanowanzo taura mazwi echokwadi asi asiri echokwadi. Mashoko avo akatendeka kusvika padanho rekuti havanyepi. Mashoko avo ndeechokwadi nekuti vanotsausa nemaune nemaune.
Kune akawanda akanaka, akavimbika, uye nemagweta echokwadi. Vezvematongerwo enyika zvakare. Asi kusavimbika nekusavimbika ndizvo zvakajairika pakati pavo.
Patinorevesa, tinogona kutaura chimwe chinhu chisiri chokwadi, asi chinangwa chedu chakanaka.
ndiudze chimwe chinhu chinonakidza pamusoro pako
Pane nguva yekutendeseka zvine hutsinye. Iyo nguva inowanzo kuve apo mumwe munhu anokukumbira iwe kuti uve. Dzimwe nguva isu tinokwanisa kuve vakatendeseka zvakakwana tisinganyatsoita chokwadi. Izvi zvinoitika nguva dzose.
Mumwe munhu anokubvunza kuti wakadii uye unopindura neushamwari, 'zvakanaka.' Kana ichokwadi iwe usiri kuita zvakanaka panguva iyoyo.
Mumwe munhu anogona kubvunza zvaunofarira, uye iwe unorevesa kubva kwavari. Iwe une zvaunofarira, asi iwe nemwoyo wese unopa mumwe munhu ropafadzo yekusarudza.
Dzimwe nguva mazwi edu ekurudziro haasi e100% echokwadi asi ivo vari 100% vakatendeka. Isu tinotaurira mumwe munhu kuti zvese zvichave zvakanaka, kana zvakadzika pasi tinoziva kuti hazvizove. Zvirinani kwete nenzira yavanofunga kuti ichave.
Dzimwe nguva tinopa izvo zvishoma zvekururama nekuda kwechokwadi uye mutsa. Inoita kuti nyika ive nzvimbo ine hushamwari.
Ini ndichavhara nedhiiti inobata chinhu chakakosha chekutaura kwedu.
Zvino usazvione sechinhu chisina basa,
Izwi rinofadza kutaura
Chiso chaunopfeka, pfungwa dzaunounza,
Moyo unogona kupora kana kutyoka.
Uye ndinokusiya uine chiyeuchidzo chakadzikama chebasa ratinaro kana zvasvika kumashoko edu:
Iva nehanya nemashoko ako. Kana vachinge vataurwa, ivo vanokwanisa chete kuregererwa, vasina kumbokanganwa.
'Ndakanganisa Moyo Wangu, Zvino Chii?' (7 Zvidimbu ZveZano)
Maitiro Ekurova Iyo Svondo Husiku Blues (aka Svondo Inotyisa)
Maitiro Ekurova kumusoro Kutaurirana Naiye Anovhura
10 Pfungwa Dzinokuvadza Dzinonyanya Kuzivikanwa Kupfuura Zvaunofunga
Ungaita Sei Kuti Uve Yemweya Kuzvimiririra Uye Kumira Kuvimba Kune Vamwe Kuti Uve Mufaro
Maitiro Ekuziva Uye Kubata Neinoshoreka Complex
38 Chokwadi Kufuridzira Anne Frank Quotes Izvo Zvichakuita Iwe Kufunga
Huchenjeri vs.Uchenjeri: Ndeupi Musiyano?
13 zvisinganzwisisike hunhu hunoshamisa hwevanhu vane hunyanzvi hwevanhu
Maitiro Ekuzvimiririra Kana Izvo Zvisingasvike Nenzira
Tsamba Yakavhurika Kune Avo Vasina Chinzvimbo, Havana Zvinangwa, Uye Vasina Kurota
zviratidzo ari kuwira kwauri asi anotya
zvekutumira mameseji mushure mekutanga zuva
hunhu hwekutsvaga mumurume
maitiro ekuita nema control freaks